The amụba hassle nke-efe efe na azụmahịa ụgbọ elu na-akwọ ụgbọala ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ ka onwe ugboelu charters. Ogologo omenala edoghi, TSA nche akwụkwọ ndọrọ ego, mmadụ jupụtara na ọdụ ụgbọelu, bụ nanị ụfọdụ n'ime ihe isi ike nke-efe efe na azụmahịa jets. Ndị mmadụ na-ejikarị ofufe mbụ na klas ma ọ bụ azụmahịa na klas na-now-esiwanye achọ na akụnụba nke onwe ugboelu charters. Otú ọ dị, n'adịghị na azụmahịa ụgbọ elu, ya adịghị mfe ịhụ na-eri nke chartering a ugboelu. Ya mere, ebe anyị zaa ajụjụ: ole ọ na-eri na-ichata a onwe ugboelu?
Ndị ọzọ Service Anyị Nye
Efu ụkwụ Private Jet ichata
The na-eri nke chartering a ugboelu e nyere n'ime dollar kwa hour nke-efe efe. dị ka atụrụ anya, ndị na-eri dịgasị n'etiti dị iche iche ụdị nke ugbo elu. Ụfọdụ ugbo elu bụ dara oké ọnụ, ebe ndị ọzọ na-adịghị na dara oké ọnụ. Ụfọdụ ugbo elu nwere ohere maka ihe karịrị iri na abụọ njem, ebe nta ndị nwere nanị anọ njem oche naanị.
Otu n'ime ndị kasị nta na ichata ụgbọ elu ke ahịa bụ Cessna tikeeti Mustang, nke nwere ike ịba ihe banyere 4-5 njem. Ọ na-eme ka ndị dị ọnụ ala ụgbọelu na-ichata: ị nwere ike n'akwụkwọ iwu a Cessna tikeeti Mustang ruo ihe $1700 kwa hour nke-efe efe.
Dịtụ buru ibu karịa tikeeti Mustang bụ Learjet 60, nke nwere ike ịba ihe ruo 8 njem. Mere site Bombardier Aerospace na Wichita, Kansas ọ ga-ewe gị banyere $3400 kwa hour nke-efe efe na-ichata na Learjet 60.
Na elu na njedebe bụ a ụgbọelu dị ka Gulfstream 550, nke riri ihe dịka $8600 kwa hour nke-efe efe oge. Ọ na-enyere a bit na ọ nwere ike ịba ihe banyere 14-19 njem.